Ny fiafaran'izao tontolo izao (La fin du monde est-elle pour demain?)
Ny fiafaran'izao tontolo izao (La fin du monde est-elle pour demain ?)
Ny Baiboly irery ihany no afaka hilaza amintsika ny momba izany. Tsy manondro datin’andro mazava izy ary tsy azo atao fototra hamoromporonana faminaniana. Milaza kosa anefa io Baiboly io fa hisy ny andro mahory, ny andro farany, ny ora farany, mba hampiharihariana ny toetran’ny olona any am-parany. Na dia amin’ireo olona mitondra ny anarana hoe kristiana aza, dia maro ireo manao tsinontsinona ny fahasoavana, mitsangana hanohitra an’Andriamanitra, ary mitsipaka ny fijoroana ho vavolombelona nataony momba ilay Zanany izay nomeny ho fanavotana izao tontolo izao. Efa ratsy izy ireo no sady mbola hiharatsy hatrany, hoy ny Soratra Masina (2 Timoty 3:13). Lavitra ny zanak’olombelona izany hihatsara izany, fa vao mainka aza izy mitombo amin’ny faharatsiana ary mizotra ho amin’ilay famaizana tsy azo ivalozana hihatra amin’ny ratsy fanahy rehetra.
Amin’ny fomba fiteny feno kisarisary raketin’ny bokin’ny Apokalypsy no anambaràn’ny Baiboly ireo fitsarana mampivarahontsana izay handimby ny faharetan’Andriamanitra amin’izao vanim-potoana iainantsika izao. “Hangorohoro ny nofo rehetra”, hiteny ratsy an’Andriamanitry ny lanitra izy, dia llay Andriamanitra tsy nitsahatra ny niantso azy ireo hatramin’ny farany hibebaka mba tsy ho tratran’ilay fahoriana lehibe tsy hanam-pahataperana. Eny, efa nasehon’ny Tenin’Andriamanitra miharihary sy manaitra ny saina tokoa ny ambangovangon’ny zavatra hiseho. Iray amin’ireny ity voarakitra ao amin’ny 2 Petera 3:7-10 ity:
Andriamanitra, Izy tenany mihitsy no naneho ny asam-pamonjena goavana izay notanterahiny tamin’ny alàlan’ny Zanany Lahitokana. Moa tsy natolony ho sorona ho antsika va io Zanany io? Moa tsy efa nahatrany Taminy va ny famaizana sahaza ho antsika tsirairay avy? Nanolotra ny tenany Jesoa Kristy mba ho fanavotana antsika rehetra. “Ny rany teo amin’ny hazofijaliana no nanaovany fampihavanana” (Kolosiana 1:20). Natao ho anao ihany koa io famonjen’Andriamanitra io, raha toa ka mandositra ilay fahatezerana ho avy ianao, amin’ny alalan’ny finoana ny anaran’ilay Zanaka Lahitokan’Andriamanitra maty noho ny fahotantsika ary nitsangana tamin’ny maty ho fanamarinana antsika.
“Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana” (Jaona 14:6).
“Hataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika?” (Hebreo 2:3)